Buugga Yavuz Sultan Selim | 3. Buundada | RayHaber | raillynews
HomeTURKEYGobolka Marmara34 IstanbulYavuz Sultan Selim Bridge 3. buundada
29 / 05 / 2013 34 Istanbul, GUUD
Yavuz Sultan Selim Bridge: 3 by President Gul. Sida sharaxaad ka bixisay xafladda munaasabadda buundada, 3 hadda. Buundada Istaatiileneska ah waxaa lagu magacaabi doonaa Yavuz Sultan Selim Bridge. 3. Munaasabadda furitaanka ee Bosphorus Bridge iyo Mashruuca Waddada Northern Marmara ayaa la qabtaa iyadoo ka qaybgasha Madaxweyne Cabdullaahi Geelle, Guddoomiyaha Baarlamaanka Jamhuuriyada Ciraaq iyo Raiisul Wasaaraha Tayyip Erdoğan iyo qaar ka mid ah wasiirrada.
Isagoo ka hadlaya xafladda, Ra'iisul Wasaaraha Erdogan ayaa yiri: "Dabcan maanta, 29 May. 560 in Fatih Sultan Mehmet uu xiray mugdi madow oo uu ku guuleystay Istanbul. Annagu waannu kula jirnaa sannad-guuradii. Waxaan jeclaan lahaa inaan fursadan ka qaato inaan ka qoomameyno taliyeyaasha suldaanka ah ee marwooyinka mar kale ku guuleystay Istanbul. Ilaah wuxuu naftiisa ku nastaa. Fatih wuxuu yiri; "Trick waa in la riixo dhismaha magaalo; Fatima Fatih Mehmet, oo ahaa Sultan of Ottoman Empire, kaas oo la yaabay aduunka, waxa uu doonayay in uu sheego in xirfada ugu muhiimsan ay tahay in la dhiso magaalooyin ayna ku guulaysato qalbiyada dadka.
Waxaan sii wadeynaa inaan taariikhda ku qorno waxyaabo ka soo jeeda taariikhdeena. Todoba ah ka shaqeeya Istanbul ayaa ka dhigi doonta inuu ka hadlo aduunka. Mar dambe ma arki doonnaa gawaarida culus ee Istanbul. Buundadani waxay sidoo kale noqoneysaa buundo leh qaababka ilaalinta deegaanka. Waxaan jeclaan lahaa inay horey u wanaagsanaan laheyd. Garoonka diyaaradaha ee saddexaad ee la xaraashayo ayaa lagu dhawaaqi doonaa aduunka. Waxaan dhegeystaa telefishanka waqti ka waqti 'geedo badan ayaa la jaraa' waxay yiraahdaan ma garanayaan meesha loo sameeyay. Wuxuu u eg yahay inuu ka tagay dagaalka. Qalabka miraha 5 wuxuu noqon doonaa casriga madaarka. Labo garoomo ayaan ku filneyn Istanbul, waxaan dhageysanay cabashooyinka rakaabka. Horumar cusub ayaa la qabtaa. Waa heesaha Kanalİstanbul. Waxay ka hadli doonaan wax badan oo ku saabsan arrintan. U baahan tahay safar wadada.
Waxaan haynaa waxyaabo aan sameyno. Marinka Marmara oo ku xira Marinka Biyaha, waxaanu oggolaan doonaa marinka maraakiibta culus ee tonnage. Ma qorsheyneyno inaan dadweynaha u barano Istanbul, laakiin si ay u dejiyaan qorshooyinka si loogu qaybiyo dadka deggan degaannadaas. Eeg Marmaray 29 oo furan bisha Oktoobar. Koonfurta koonfureed ee tuubada hoostiisa hoostiisa, kadibna gawaarida ayaa mar kale maraya. Miyirkooda miyuu qaataa maalgelin noocaas ah? Alsa ayaa sidaas samayn lahaa. Ma dhahayo tallaabo kale waa Yassi Island. Halka Mendere la toogtay. Go'aanka ayaa la gaaray. Laba wasiir ayaa isku mid ah. Hadda waxaan ka dhigi doonnaa jasiiradda iyo Sriishada ee ku xiga ujeedada dimuqraadiyadda iyo xoriyada.
Waxaan isku diyaarineynaa hindise cusub ee Horn Goolka. Anagu ma soo saarno erayo, waxaan soo saaraa ganacsi. Wax kasta oo aad ku qabato Park Gezi, waxaan go'aan ka gaadhay go'aankeenna waxaanan ku soo celin doonaa taariikhda halkaas. Waxaan siineynaa meelaha kuwa doonaya in ay geedo ku beeri karaan.
Xilligan, buundooyinka waxay ku shaqeynayaan awood laba jeer iyo nus ah, wakhti qashin ah. Waxaan isku dayaynaa in la dhiso mustaqbalka URL Turkiga. Waxay noqon doontaa mashruuc loogu talagalay adduunka. Waxaan nahay quruun weyn. mashruuc kasta lagu qaban doonaa Istanbul kordhin doonaan sharafta Turkiga. Marmaray wuxuu ku dhowyahay inuu joojiyo mashruuca qarniga. 29 waxay furan doontaa bisha Oktoobar.